ခြံရောင်းမည် | ဆက်သွယ် ရန်၊ ကိုမျိုးကျော် ဖုန်း ၀၉၂၅၀၀၀၂၇၄၇
Home » Property » ခြံရောင်းမည်
Contact Number: ၀၉၂၅၀၀၀၂၇၄၇
Email Address: myokhaing1848@gmail.com
Listed: October 26, 2014 7:04 pm
ပြင်ဦးလွင်အနီးစခန်းရပ်ကွက်အမှတ် ၁၅ အတွင်းရှိရှေ့မျက်နှာစာ ၁၃၅ ပေ၊ရှေ့နောက် ၁၇၅ ပေ၊နောက် ၈၀ ပေ၊ပုံစံ ၁၀၅ ကျပြီး၊ခြံစည်းရိုးချိန်းလိပ်ဖြင့်ခတ်ပြီးခြံရှေ့ရှိရေနုပ်မြောင်းကွန်ကရိတံတားထိုးပြီးခေါ်ဈေး ၅၀၀သိန်း။
ဆက်သွယ် ရန်၊ ကိုမျိုးကျော် ဖုန်း ၀၉၂၅၀၀၀၂၇၄၇. ၁၂၄၄/၁ သစ္စာလမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ရန်ကုန်။
Ad Reference ID: 461544cea67eaac9
For Sale property for sale to sell
ငှား / ရောင်း
All times are GMT 6.5. The time now is 11:21 am.